Xulalka Koonfur Galbeed iyo Puntland oo u soo gudbay wareegga xiga ee tartanka – Radio Muqdisho
Xulalka Koonfur Galbeed iyo Puntland oo u soo gudbay wareegga xiga ee tartanka
Xulalka kubbada cagta Koofur Galbeed iyo Puntland ayaa galabta cayaar kulul ku dhexmartay garoonka kubadda Cagta ee Benaadir Stadium, iyadoo cayaarta ay lahayd xiiso gaar ah maadaama la wada sugayay cidda ka soo gudbeysa wareegga koowaad ee tartanka.
Xulka Koofur Galbeed ayaa qeybtii hore ee cayaarta ku hormaray hal gool taasi oo ka dhigneyd in qeybtii hore lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hogaaminayeen cayaartooyda Xulka Koonfur Galbeed, balse qeybtii dambe ee cayaarta ayaa Xulka kubada Cagta ee Puntland waxa ay la yimaadeen goolkii bar baraha ahaa, taasi oo cayaarta ka dhigtay 1-1.
Waqtigii loogu talagalay cayaarta waxa ay ku soo idlaatay bar baro 1-1, waxayna labada xul ay xaqiijiyeen inay u soo gudbeen wareega labaad ee tartanka dowlad goboleedyada, waxaana tartanka isaga haray xulka Hirshabelle oo noqday xulkii ugu horeeyay ee tartanka ka hara kadib markii labadii kulan ee ay hore u ciyaareen ay ka urursadeen hal dhibic oo qura.
Xulka Puntland ayaa waxaa kulanka wareegga afar dhamaadka ah ay isku soo beegmeen xulka gobolka Banaadir oo hogaaminaya, halka xulka Koofurgalbeed uu la ciyaari doono xulkii soo badiya Galmudug iyo Jubaland kulanka ay yeelan doonaan maalita beri ah.
Taranka ciyaaraha dowlad goboleedyada oo ay maamuleyso Wasaarada Dhallinyarada iyo Isboortiga ayaa si xiiso leh ugaga socda garoonka Koonis Stadium degmada C/casiis ee Gobolka Benaadir.
Taliska Ciidanka Asluubta oo dib u dhis ku sameynaya xarumihii Taliska
Wafdiga uu hogaaminayo Guddoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe oo kormeeray tuulooyin hoostaga Balcad